र्यान ग्रिफिन, केश पढ्ने बच्चाहरूलाई छुट दिने कपाल वर्तमान साहित्य
कारमेन गुइलन | | साहित्य, हाम्रो बारेमा
Ypsilanti भनिने सानो मिशिगन शहरमा, त्यहाँ नाम गरेको नाईको पसल छ फुलर कट। अहिले सम्म सबै सामान्य र साहित्यको साथ केहि गर्नको साथ, हैन? जाँदै गरौं! यो नाईको पसल एक जना मानिस द्वारा २० बर्षदेखि चलाइएको छ रायन ग्रिफिन, जो एक कपाल हुनुको साथै अभ्यासको साथ एक छ अफ्रिकी अमेरिकी अध्ययनमा डिप्लोमा। सामान्यतया, कपालका कपाल र केशहरू जुन हामी सबैलाई थाहा हुन्छ हामी सबै मौसममा विशेष छूट बनाउँछौं प्लस कम्बि forको लागि, हाइलाइटहरू र विशेष उपचार इत्यादिका लागि। रायन ग्रिफिनले तिनीहरूलाई पनि गर्छ, तर अर्को कारणको लागि, अझ राम्रो र राम्रो कारणका लागि।
र्यान ग्रिफिनले ती बच्चाहरूलाई २ डलर छुट दिन्छन् जसले ठूलो स्वरमा पढ्छन् उसले आफ्नो कपाल काट्छ भने वा कपाल कोर्दछ। अब सम्म एक विस्तार कि उनलाई सम्मान र उसलाई सामान्य मा साहित्य र विशेष गरी नाबालिग को शिक्षा को लागी उदारता मा उसे साझा बनाउँछ। तर कथा यहाँ अन्त्य हुँदैन, यसको एउटा अझ राम्रो विस्तार छ ... र तथ्य यो हो कि पुस्तकहरू साधारण कथा होइनन्। ती पुस्तकहरू हुन् कि उनीहरू अफ्रिकी अमेरिकी समुदायको एक सकारात्मक र राम्रो छवि प्रोजेक्ट गर्न कोशिस गर्छन्। ग्रिफिन आफैले भने जस्तो: «तिनीहरू अफ्रीकी अमेरिकीहरू द्वारा लेखिएका पुस्तकहरू हुन्। म चाहन्छु कि साना-नानीहरू आफ्ना साथीहरूको साथ सम्पर्कमा रहून्। तिनीहरूलाई खेलाडीहरू वा अन्तरिक्ष यात्रीहरू हुन् र उनीहरूको उहि बिन्दुबाट सुरु भएका पात्रहरूको बारेमा पढ्नुहोस्। मेरो लक्ष्य भनेको यो छ कि ग्राहकले उपन्यास खोल्दा उनीहरू सोच्दछन्: 'वाह! यस केटाको छाला र कपाल मेरो जस्तो छ, र ऊ महान छ। "
यस्तो असर यो छ कि यस समाचारले विश्वभरि फैलिएको छ, सामाजिक नेटवर्कहरू र इन्टरनेट मार्फत मात्र होइन तर विभिन्न भौगोलिक भागहरूका न्यूजकास्टहरूले पनि यसलाई प्रतिध्वनित गरेको छ। त्यसकारण, र सारांशमा, हामी के राम्रो पोइन्टहरू प्राप्त गर्दछौं यस महान कपालको पहलबाट?
पावर पुस्तक र साहित्य को लागी स्वाद सामान्यतया, केटाहरू र केटीहरू द्वारा।
तपाईंको शिक्षा, तपाईंको भाषा सुधार गर्नुहोस् ...
परिवर्तनलाई उक्साएर विश्व सुधार गर्न मद्दत गर्नुहोस् विशेष गरी अफ्रिकी अमेरिकीहरूका लागि अमेरिकी सन्दर्भमा आवश्यक छ।
र यो यो हो कि थोरै वा धेरै हदसम्म विश्वलाई राम्रोको लागि परिवर्तन गर्न सक्दछ, र यो यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। र्यान ग्रिफिनका लागि राम्रो!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » र्यान ग्रिफिन, केश पढ्ने बच्चाहरूलाई छुट दिन्छ